Wednesday October 24, 2018 - 16:09:22 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay dajisay qorshe cusub oo ay ku sugeyso ammaanka gobolka Gummeysi kujiro ee NFD loo yaqaan.
Guddi ka socday dowladda Kenya iyo 'gobolka Waqooyi Bari' ayaa kulan ay yeesheen kasoo saaray go'aammo ay ku sheegeen in looga hor tagayo weerarada joogtada ah ee Xarakada Al Shabaab ka fuliso gobolka.
Cali Roobo oo ah guddoomiyaha gobolka Mandheera ayaa warbaahinta u sheegay in qodobada lasoo saaray ay kamid yihiin in shacabka Soomaalida ee dhulka NFD ay bixiyaan Megta qofkii Kenyaati Kirishtan ah ee lagu dilo dhulkooda tallaabadaas oo uu ku sifeeyay mid lagu yareynayo weerarada Argagaxisada sida uu hadalka u dhigay.
Qorshahan ayaa ah mid cadaadis iyo gummeysi hor leh lagu saarayo shacabka gummeysiga kujira ee ku dhaqan gobolka NFD oo ay Kenya heysato, dhinaca kale 500 oo macallimiin Kenyaan ah ayaa diiday in ay dib ugu laabtaan gobolka waqooyi Bari.
War ay macallimintu soo saareey ayay ku sheegeen in ay ku qaadaceen amarkii Uhuu Kenyatta ee farayay in ay dib ugu laabtaan gobolka Soomaalida si ay halkaas ugasoo wadaan shaqooyinkii ay udirtay wasaaradda Waxbarashada.
Weerar Horraantii bishaan ka dhacay ee deegaanka Alcarabiya ee duleedka Mandheera ayaa lagu dilay 2 Macallimiin Kenyaan Kirishtaan ah waxaana mas'uuliyadda weerarkaas sheegatay Xarakada Al Shabaab.